DOODDA SOOMAALILAAND EE XUDDUUDDII ISTICMAARKA DOW MA AHA - WardheerNews
Markii ay burburtay dawladdii dhexe ee militerigu hoggaaminayeen ee Soomaaliya bishii koowaad ee sanadkii 1991-dii, Soomaalilaand ayaa bishii shanaad ee isla sanadkaas waxa ay ku dhawaaqday iney ka go’day Soomaaliya.
Xudduuddii wakhtigii Isticmaarka
Bishii sideeddaad ee sanadkii 1998-ddii ayaa waxa magaalada Garoowe lagu dhisay maamulka Buntlaand, iyadoo isimada iyo waxgaradka Sool, Sanaag Bari iyo Buuhoodle ay ka mid ahaayeen dadkii wax ka dhisay maamulka Buntlaand, deegaannadaas oo Soomaalilaand dhinaceeda ay ku doodeysay iney ka mid yihiin dhulka ay ka goyneyso Soomaaliya inteeda kale.
Dalal badan oo Afrika ka mid ah ayaa markii ay madax banaanidooda qaateen, waxa ay isku qabsadeen dhul, waxaana markii dambe dalalkii afrikaanku ku heshiiyeen in xudduudihii gumeystuhu ka tagay sidoodii loo daayo, si meesha looga saaro is qabqabsiga xudduudaha ku saleysan. Waa dhab oo heshiiskaas waa jiraa, waana doodda ugu culus ee Soomaalilaand miiska soo saarto marka ay ka hadleyso gobollada Sool iyo Sanaag Bari, balse waxaa is weydiin mudan inaan is dul taagno qodobadan soo socda:
Dadka deggan dhulkii Ingiriisku gumeysan jirey (Soomaalilaand) iskuma raacsana in dib loo soo nooleeyo xadkaas oo laga laabto midowgii 1960-kii.
Xadka Ingiriiska iyo Talyaaniga ay kala xariiqdeen waxa uu ahaa mid dheer oo kala qeybinayey gobollada Sanaag iyo Bari oo isku beegan iyo Sool iyo Nugaal oo isku began (gobollada Bari iyo Nugaal waxa ay isku ahaayeen hal gobol, halka gobollada Sool, Sanaag iyo Togdheer ay hal gobol isku ahaayeen) Xadkaas waxa uu in yar u jiraa, magaalooyinka Boosaaso, Qardho iyo Garoowe –Maxaa xadka yoocada ka duway xudduuddii kale?
Kolkii dalalka Afrika ku heshiiyeen in xudduudihii isticmaarku uga tagay Afrika ay sidoodii ahaadaan, dalka Suudaan waxa uu ahaa hal dal. Waxaa ka dambeeyey in sanadkii 2011-kii ay laba u kala go’een oo Koofurta Suudaan dal gaar ah dunidu u aqoonsatay. Dood wax ka soo qaad leh ma noqoneyso haddii lagu dooddo xudduuddii isticmaarku Afrika uga tagay, waayo, xadka labada Suudaan kala qeybiya ayaa ka dambeeyey oo dunidu aqoonsatay.